Kwik kwik - I-Airbnb
Indlu ikwihektare yepropathi yabucala entliziyweni ye-County Mayo kwintshona yeIreland. Iimbono ezisuka phambi kwendlu zezaseLough Carra, ichibi leehektare ezingama-4,000 elidume ngokuloba kunye nezilwanyana zasendle ezahlukeneyo.
Lo mhlaba ukwisiza sendawo eyayikade iyindlu yesikhephe yelizwe eyakhiwa ngo-1786. Indlu yesikhephe isemi ngasemva kulo mhlaba. Indlu ngokwayo yakhiwa ngowe-1968 ngutatomkhulu, owayengumlobi okhutheleyo, njengekhaya leeholide. Xa utatomkhulu wam waswelekayo utata waqalisa ukurenta indlu ikakhulu kubalobi, wayeneshishini lokuqesha izikhephe awayelibaleka kumzi wamaphenyane wakudala. Indlu ijonge emazantsi eLough Carra, ichibi leehektare ezingama-4,000. Sinendawo yokuhombisa ngaphandle kwendlu kunye nefenitshala yegadi ukuze siphumle kwaye sonwabele ukuzola. Kukho phantse ihektare yepropathi yabucala ukuze iindwendwe zizulazule ngaphakathi kunye nengca enkulu yokuphumla okanye ipikiniki. Sinomlilo ovulekileyo owona mthombo uphambili wokufudumeza kwigumbi lokuhlala. I-intanethi ikhawuleza kwaye kukho isignali eyomeleleyo yefowuni ephathwayo evela endlwini. Sinemidlalo yebhodi embalwa, ukudlala amakhadi kunye ne-vintage Rubix cube ukuya ngelixa kude ngokuhlwa emlilweni. Iindwendwe ezininzi zipaka iimoto zazo, zivale isango kwaye zingashiyi ipropathi kangangeveki.
Mna nomfazi wam sihlala eWestport nabantwana bethu abathathu. Simalunga nemizuzu engama-35 kude nendlu. Silungisa indlu kwaye sishiye iindwendwe ukuba zijonge ngokwabo. Asidli ngokubiza iindwendwe ngaphandle kokuba kukho into efuna ingqalelo yethu. Siyafumaneka ukuba undwendwe luyasidinga kwaye sinosapho olukufutshane nendlu ukuba kukho into engxamisekileyo.
Mna nomfazi wam sihlala eWestport nabantwana bethu abathathu. Simalunga nemizuzu engama-35 kude nendlu. Silungisa indlu kwaye sishiye iindwendwe ukuba zijonge ngokwabo. Asidli ngok…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Claremorris